Samsung Galaxy Note 7 ga-abata na Spain na September 9 | Akụkọ akụrụngwa
Samsung Galaxy Note 7 ga-abata na Spain na September 9
El Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. Nwere ike ịzụta ya n'ọtụtụ mba gburugburu ụwa, ọ bụ ezie na ndị ọrụ agaghị amalite ịnata ya ruo ụbọchị mbụ nke Septemba. Na Spen n'oge ahụ anyị enweghị ụbọchị ịnata ngwaọrụ yana maka mbata ya na ahịa, mana ụnyaahụ Samsung mere ya ọkwa.
Na Septemba 9, Galaxy Note 7 ga-adị na Spain, nke ga-enyo enyo na mba ndị ọzọ dị na Europe nke ga-ere ya na Septemba 2. N'ezie, anyị nwere ike inwe obi ụtọ, n'ihi na mba ndị pere mpe na Europe ga-echere rue Septemba 16 iji nwee ike inweta ya.
Dị ka anyị kwuru kemgbe August 16 gara aga, ị nwere ike idobe flagship Samsung ọhụrụ, nke ga-amalite mbupu na August 30, nke mere na ndị na-azụ ahịa na-amalite ịnata ya na ụbọchị mbụ nke Septemba. N'oge ụlọ ọrụ South Korea agbanwebeghị ụbọchị a maka Spain ka onye ọ bụla na-eme ndoputa nke ngwaọrụ ahụ nwere ike ịmalite ịnụ ụtọ ya ụbọchị ole na ole tupu etinye ya na ire.
N'oge a anyị ga-anọgide na-eche ịhụ onye ọrụ gọọmentị na-abịa na ahịa Spanish nke Galaxy Note 7, ọnụ nke ugbu a gafererịrị atụmanya niile yana na dịka Samsung siri gafee ebe abụọ emere na ọ bụghị ogologo oge gara aga nke Galaxy S7 Edge.
Youzụlarị Samsung Galaxy Note 7 gị ma ọ bụ na ị na-ahọrọ ịhọrọ nke ọzọ nke ọtụtụ ọdụ na ahịa?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Samsung Galaxy Note 7 ga-abata na Spain na September 9
Angel P Fong dijo
$ 850.00 dị oke ọnụ
Zaghachi Angel P. Fong
Xiaomi na-ekwuputa Redmi Rịba 4 na 5,5 "ihuenyo, mgbawa Helio X20 na batrị 4.100 mAh